KEDU IHE MMEMME NTANETỊ NA KỌMPUTA? - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Kedu ihe mmemme ntanetị na kọmputa?
N'ụwa taa, kọmputa na-abanye n'ime ndụ anyị. Ọtụtụ ebe anaghị eche na ọ bụghị PC: mgbagwoju anya nke mgbakọ na mwepụ, imewe, ịme ihe, njikọ Ịntanetị, wdg. N'ikpeazụ, ọ bịara ịbịaru!
Ugbu a, ọ bụghị nanị ndị na-ese ihe, mana ndị na-ahụkarị ndị hụrụ n'anya nwere ike ịnwa ịbịaru ụdị "ihe ngosi" site n'enyemaka nke mmemme pụrụ iche. Ọ ga-amasị m ikwu banyere mmemme mmepụta pụrụ iche a na kọmputa na isiokwu a.
* Ana m achọpụta na ọ bụ naanị usoro omume n'efu ka a ga-atụle.
1. Agba bụ ndabara mmemme ...
2. Gimp bụ eserese dị ike. editọ
3. MyPaint - nka osise
4. Graffiti Studio - maka graffiti Fans
5. Artweaver - nnọchi maka Adobe Photoshop
6. Ezigbo nri
7. PixBuilder Studio - obere photoshop
8. Inkscape - analogue nke Corel Draw (vector ndịna-emeputa)
9. Livebrush - ihe osise
10. Mbadamba eserese
Kedu onye chọrọ mbadamba nkume?
Ọ dị na Paint na m ga-achọ ịmalite nyochaa nke ịbịaru mmemme, ebe ọ bụ ọ na-esonye na OS Windows XP, 7, 8, Vista, wdg, nke pụtara na ịkwesighi ibudata ihe ọ bụla iji malite ịbịaru - ịkwesighi ya!
Iji meghee ya, gaa na menu "mmalite / mmemme / ọkọlọtọ", wee pịa "akara" Paint.
Usoro ihe omume ahụ dị nnọọ mfe ma ọbụna onye ọhụụ nke na-emegharị n'oge na-adịbeghị anya PC nwere ike ịghọta ya.
N'ime ọrụ ndị kachasị: iweghachi foto, ibelata akụkụ ụfọdụ nke onyinyo ahụ, ikike ịmepụta pensụl, ahịhịa, jupụta mpaghara ahụ na agba a họọrọ, wdg.
Maka ndị na-adịghị etinye aka na foto, n'ihi na ndị na-achọ mgbe ụfọdụ ịhazigharị ihe dị na foto ndị na-enweghị ihe - ikike nke usoro a karịrị oke. Ọ bụ ya mere ịmara nke ọma na ịbịaru PC m na-akwado ịmalite ya!
Gimp bụ onye nchịkọta akụkọ nchịkwa dị ike nke nwere ike ịrụ ọrụ na mbadamba mbadamba * (lee n'okpuru) na ọtụtụ ngwaọrụ ndenye.
- meziwanye foto, mee ka ha na-enwu gbaa, mee ka mmepụta mmepụta agba;
- ngwa ngwa na ngwa ngwa wepu ihe ndi choro na foto;
- kpochapụ ihe ntanetị nke weebụsaịtị;
- ịde foto site na iji mbadamba eserese;
- nhazi nchekwa faịlụ ya ".xcf", nke nwere ike ịchekwaa ederede, textures, n'ígwé, wdg;
- Agbara ohere iji rụọ ọrụ na desktọọpụ - ị nwere ike ịtinye foto ozugbo na usoro ihe omume ahụ wee malite idezi ya;
- Gimp ga-ekwe ka ị na-edebe ihe oyiyi oyiyi na-ada na ofufe;
- ike imeghe faịlụ na usoro ".psd";
- ịmepụta nkwụnye nke gị (ma ọ bụrụ na ị, n'ezie, nwere nkà mmemme).
MyPaint bụ onye nchịkọta akụkọ na-elekwasị anya na ndị na-ese ihe. Usoro ihe omume ahụ na-arụ ọrụ dị mfe, tinyere nchacha na-akparaghị ókè. Ọ bụkwa ezigbo nchara nke brushes, nke na-enye aka nke usoro ihe a, ị nwere ike ịde foto na kọmputa, dịka na ịcha akwa!
- omume nke ngwa ngwa na iji bọtịnụ e kenyere;
- Nnukwu nhọrọ nke brushes, ntọala ha, ike ịmepụta na mbubata ha;
- nkwado dị mma maka mbadamba nkume ahụ, n'ụzọ, a na-emepụta ihe omume ahụ maka ya;
- na-akparaghị ókè canvas size - ya mere ihe ọ bụla ókè gị creativity;
- Ike na-arụ ọrụ na Windows, Linux na Mac os.
Usoro a ga-adọrọ mmasị ndị niile nwere mmasị na graffiti (dịka ntụziaka nke usoro ihe omume ahụ nwere ike ịkọwa aha).
Ihe omume a na-adọrọ mmasị ya site n'echiche dị mfe, n'eziokwu - foto ndị sitere na pen dị ka ihe kacha mma na mgbidi ndị ọkachamara.
N'ime usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ ọgba aghara, dịka ọmụmaatụ, ụgbọala, mgbidi, bọs, nke iji nọgide na-arụ ọrụ ebube ha.
Panọl na-enye nhọrọ nke ọtụtụ agba - karịa 100 iberibe! E nwere ohere imegharị ọkụ, gbanwee anya ruo n'elu, jiri akara akara, wdg. N'ozuzu ya, ụlọ ọrụ dum nke graffiti art!
Ndị nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ na-ekwu na ọ bụ Adobe Photoshop kachasị mma. Usoro ihe a na-eme ka eserese na mmanụ, agba, pensụl, nzu, ahịhịa, wdg.
O kwere omume na-arụ ọrụ na n'ígwé, ihe atụ gbanwere ihe oyiyi dị iche iche, mkpakọ, wdg. Ikpe ikpe site na nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a, ị pụghị ịkọ ọdịiche dị na Adobe Photoshop!
SmoothDraw bụ ezigbo onye nchịkọta akụkọ, yana ọtụtụ ohere maka nhazi na ịmepụta ihe oyiyi. N'ụzọ bụ isi, usoro a na-elekwasị anya n'ịmepụta ihe oyiyi site na isi, site na ọcha na ọcha akwa.
N'ụlọ agha gị, a ga-enwe ọtụtụ ihe eji emepụta na ihe eji emepụta ihe: brushes, pencils, pens, pens, etc.
A naghị etinyekwa ya n'ọrụ na mbadamba nkume, tinyere usoro ihe omume a dị mfe - enwere ike ịkwado ya ka ọ bụrụ ọtụtụ ndị ọrụ.
Ihe omume a na netwọk ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ ejirila foto foto a. Ọ nwere ọtụtụ n'ime atụmatụ na ike nke usoro Adobe Photoshop a kwụrụ ụgwọ: nchịkọta dị iche na nke dị iche iche, enwere ngwaọrụ maka ịchacha, gbanwee ihe oyiyi, ị nwere ike ịmepụta ihe dị mgbagwoju anya na ihe.
Ezi ngosipụta nke ụdị ụdị ihe oyiyi dị iche iche, ihe na-egbu egbu, wdg.
Banyere ihe ndị dị otú ahụ dịka ịgbanwu ogo foto ahụ, ntụgharị, ntụgharị, wdg. - ma kwuo, eleghị anya ọ gaghị aba uru. N'izugbe, PixBuilder Studio bụ ezigbo kọmputa na ntinye ederede.
Nchịkọta akụkọ foto a na-eseghị ihe bụ analogous Corel draw. Nke a na-ese usoro mmemme - ee. ngalaba ndị a chọrọ. N'adịghị ka ihe oyiyi, ihe oyiyi ngwa ngwa na-adị mfe ngwa ngwa n'enweghi ike! Na-emekarị, a na-eji usoro dị otú ahụ eme ihe.
Ọ bara uru ịkọ Flash ebe a - eserese na-ejikwa ya n'ebe ahụ, nke na-enye ohere iji belata nza nke vidiyo!
Site n'ụzọ, ọ bara uru na-agbakwụnye na usoro ihe omume ahụ nwere nkwado maka asụsụ Russian!
Ntughari ihe di mfe nke oma na ike nhazi ederede. Otu n'ime ihe ndị bụ isi nke nchịkọta akụkọ a bụ na ị ga-adọta ebe a ahịhịa! Ọ dịghị ngwaọrụ ọzọ!
N'aka nke aka, oke ókè a, ma n'aka nke ọzọ, usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịghọta ọtụtụ ihe na n'ụzọ ọzọ - ị gaghị eme nke a!
Akwa ọtụtụ brushes, ntọala maka ha, ọrịa strok, wdg. Ọzọkwa, ị nwere ike ịmepụta brushes onwe gị ma budata na Ịntanetị.
Site n'ụzọ, a ghọtara "brush" na livebrush ọ bụghị dị ka "dị mfe" akara, kamakwa na ụdị nke ọdịdị dị iche iche nke geometric ... N'ikpeazụ, a na-atụ aro na a ga-ejiri mara ndị fans niile na-arụ ọrụ na ndịna-emeputa.
Mbadamba eserese bụ ihe osise pụrụ iche na kọmputa. Na-ejikọ na kọmputa site na USB. Site n'enyemaka nke pen, ị nwere ike ịkwọ ụgbọala na mpempe akwụkwọ eletrọniki, na na kọmputa gị, i nwere ike ịhụ foto gị n'Ịntanet ozugbo. Ukwu!
Mbadamba nkume ahụ nwere ike ịba uru ọ bụghị naanị maka ndị na-emepụta ọkachamara, kamakwa maka ụmụ akwụkwọ na ụmụaka. Na ya, ị nwere ike idezi foto na ihe oyiyi, webata graffiti na netwọk mmekọrịta, ngwa ngwa na ngwa ngwa gbakwunye ihe odide na ihe osise. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe ị na-eji pen (mbadamba ụrọ), eriri na nkwochi adịghị agwụ ike n'oge ọrụ ogologo, dịka mgbe ị na-eji òké.
Maka ndị ọkachamara, nke a bụ ohere iji dezie foto: ịmepụta ihe nkpuchi, retouching, edezi ma na-emezi ndozi nke ihe oyiyi (ntutu, anya, wdg).
N'ikpeazụ, ị ga-eji mbadamba nkume rụọ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ndịna-emeputa, ngwaọrụ ahụ dị oke mkpa! Na-atụ aro ka ndị niile na-ahụ ihe nkiri ndị hụrụ n'anya.
Na nyochaa nke mmemme ka agafe. Nwee ezigbo nhọrọ na foto mara mma!